ကျွန်မငယ်ငယ်တုန်းက ကောင်းကင်မှာပျံနေတဲ့ လေတံခွန်လေး(Kite) လေးတွေ ကိုကြည့်ပြီး အတွေးလေးတစ်ခုဝင်ခဲ့ဖူးတယ်။ သူတို့လို လေထဲမှာ ၀ဲပျံကြည့်ချင်လိုက်တာ အသက်(၂၀)ပြည့်ပြီးချိန်မှာ ဒီအတွေးလေးက မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ဖြစ်သွားခဲ့တာ ပထမဦးဆုံးအလုပ်ကိစ္စနဲ့ လေယာဉ်ပျံစစီးဖူးတဲ့အချိန်မှာ ဒီအတွေးလေးက အမှတ်မထင်ပြန်ပေါ်လာခဲ့တယ်။
ဟုတ်တယ် . .လေတံခွန်လေးလို ၀ဲပျံခွင့်မရနိုင်ပေမဲ့ လေယာဉ်ပျံပေါ်မှာ အလုပ်၊ လုပ်ခွင့်ရနိုင်ရင် လေထဲ မှာ ၀ဲပျံခွင့်ရတာနဲ့ အတူတူပဲလေ!
ကျွန်မ ရည်မှန်းချက် အကောင်အထည်ဖော်ဖြစ်သွားခဲ့ပြီ
ကျွန်မ လေယာဉ်မယ်ဖြစ်လာတဲ့အခါ လေထဲမှာ လျှောက်သွားနိုင်မှာလေ .
ကျွန်မစိတ်ကူးလေးကို လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့သူက ကျွန်မဖေဖေလေ . .
Myanmar Airways ရဲ့ Air Crew Application Form ကို သူကိုယ်တိုင် ယူလာခဲ့ပြီး ကျွန်မရည်မှန်းချက်တွေကို အရာထင်စေခဲ့တာလေ . .
လျှောက်လွှာမှာ လိုအပ်တဲ့အချက်တွေကို ပြည့်စုံမှန်ကန်စွာ ရေးသွင်းနိုင်ဖို့နဲ့ လျှောက်လွှာတင်ပြီး Interview ဖြေခဲ့စဉ်တစ်လျှောက်က အတွေ့အကြုံ၊ အမှားအယွင်းလွဲချော်ပုံများကို ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းများကို စေတနာနဲ့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာမှာ Name, Age, Weight, Height, Occupation, Education,National Registration Card No & Scruting Card No.,Passport No., တို့ အပြင် English Speaking & Language ဘာတတ်မြောက်ပါသလဲ?
နောက်တစ်ချက်က Other Language ဘယ်လောက်ထိတတ်မြောက်ပါသလဲ၊ မျှော်မှန်းလစာ ဘယ်လောက်ခန့်မှန်းပါသလဲ?မျက်မှန်သမားလား၊ အရေးအကြီးဆုံးက ရေကူးတတ်ပါသလား၊ ဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေမှာ ကိုယ်တကယ်တတ်မှ တတ်မြောက်ကြောင်း ပုံစံကွက်မှာ Yes, ကို Marking လုပ်ပါ။
ကြွားချင်ဇောနဲ့ ဒါမှမဟုတ် လူအထင်ကြိးအောင် မဖြည့်ပါနဲ့၊ ဒီလို ပြောရတာအကြောင်းရှိပါတယ်။ English စာတတ်ကျွမ်းမှုကို Fluently, Average, မှာ သက်ဆိုင်ရာ အကွက်မှာ Markingလုပ်ပါ။ Other Language မှာ မိမိတ်ကျွမ်းတဲ့ ပညာရပ်နဲ့ ဆိုင်တဲ့အရေးနဲ့ အပြောတတ်ကျွမ်းပုံကို အထက်ပါအတိုင်းဖြည့်စွက်ရပါတယ် ။
ဥပမာ-CHINESE ဆိုရင် CHINESE, KOREA ကျွမ်းရင် KOREA ပေါ့၊ မျက်မှန်သမားများအထူးသတိထားရမှာက မျက်မှန်တကယ်တတ်ပါရဲ့နဲ့ မတတ်ဘူးဆိုပြီး ညာဖြည့်တာ မျိုးမဖြစ်သင့်ပါဘူး။ နောက်မှ ဆေးစစ်လို့ ပေါ်လာရင် အလွန်ရှက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
နောက်လိုအပ်တဲ့ Photo Size 5”x7” တစ်ကိုယ်လုံး၊ ဘေးတိုက်၊ ရှေ့တည့်တည့် တစ်ပုံစီနဲ့ Passport Size သုံးပုံလိုအပ်ပါတယ် . .
ဘွဲ့လက်မှတ်မိတ္တူ၊ သန်းခေါင်စာရင်းမိတ္တူတို့ကိုပါ တစ်ပါတည်း တွဲတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လိုအပ်တာတွေ ဖြည့်စွက်ပြီးရင်တော့ လျှောက်လွှာသွားတင်ဖို့ Ready လုပ်ပေတော့ . .အထူးသတိထားရမယ့်အချက်က လျှောက်လွှာမှာ English လိုတစ်မျိုးတည်းပဲ ရေးသင်းရမှာ ဖြစ်ပြီး အားလုံးကို Block Letter နဲ့ ရေးသွင်းဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ အရည်အချင်းရှိပါရက်နဲ့ ပြီးစလွယ် Small Letter နဲ့ ရေးမိလို့ အပယ်ခံရတဲ့ လျှောက်လွှာတွေ တပုံကြီးတွေ့ဖူးလို့ပါ!
မိမိရဲ့ မှတ်ပုံတင်မိတ္တူ၊ သန်းခေင်စာရင်းမိတ္တူစတဲ့ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းများကို သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ပေါင်းပြီး တွဲချုပ်သွားစေချင်ပါတယ် . .ဒါမှလည်း များပြားလှတဲ့ လျှောက်လွှာပုံကြီးထဲမှာ မိမိForm မကျန်ခဲ့မှာပါ။ ပိတ်ချိန်ဖြစ်တဲ့ ညနေ(4)နာရီကို ညနေ(33း0)နာရီလောက်မှ ကပ်ပြီးတင်တာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့ . .၀န်ထမ်းများအားလုံးက Form တင်ပြီးရင် ရေးသွင်းရမယ့်အချက်များ အားလုံးကို ရေးသွင်းပြီး လက်ခံရရှိကြောင်း ချလံ ပြန်ပေးပါတယ်။ အဲဒီအတွက် သူတို့ကို အချိန်အလုံအလောက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်မသွားတင်တဲ့နေ့ကဆိုရင် နေ့လယ်ထမင်းစားပြီးတဲ့ အချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက် လူအရမ်းများနေတဲ့အချိန်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ မနက်ပိုင်းတစ်ချီလာတင်တဲ့သူတွေက ထမင်းစားနားချိန်နဲ့ကြုံလိုက်တော့ မပြန်ကြတော့ပဲ M.A ရုံးချုပ်မှာပဲဇွဲနဲ့ စောင့်နေကြတော့ လူတစ်ပြုံတမကြီးဖြစ်ကုန်ရော၊
လျှောက်လွှာပေါင်းလေးထောင်ကျော်(4000)ကျော် တင်ကြတဲ့ မနက်မှာ ကျွန်မရဲ့ လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ်က (0568)ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့တာရဲ့အမှတ်စဉ် နံပါတ်က (032)ပါ။ လျှောက်လွှာတင်ပြီးပြီပဲ ဘာလို့ စာရင်းဝင်နံပါတ်တွေ မှတ်နေရမှာပဲ လို့ အလွယ်မတွေးလိုက်ပါနဲ့၊ Interview ၀င်တဲ့အခါ သာမညလေးတွေက အဓိက ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။ စိတ်မထင်ရင် လျှောက်လွှာအမှတ်စဉ် ဘယ်လောက်လဲ၊ ဆိုပြီး မေးတတ်ပါတယ်၊ လျှောက်လွှာတင်ပြီးတာနဲ့ ကျွန်မတို့ကို အရပ်တိုင်းပါတယ်။ မမှန်မကန်ဖြည့်သွင်းထားရင် ချက်ချင်း ဖျက်ခိုင်းပါတယ်။ ကျွန်မ ဖြေဆိုခဲ့ရတဲ့ Myanmar Airways ရဲ့ System က လျှောက်လွှာတင်ပြီး သိပ်မကြာခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းကို ပဏာမရွေးချယ်ခံရသူများ စာရင်းကို ကြေငြာ ပါတယ် ။တစ်ခြား Airline တွေက Walk-in-interview လုပ်တာများပါတယ်!
အရွေးချယ်မခံခဲ့ရသူအများစုက Form ကိုဖြစ်ကတတ်ဆန်းဖြည့်သွင်းသူများ၊ Block Letter နဲ့ မရေးသူများ၊ လိုအပ်တဲ့ စာရွက်စာတမ်းအပြည့်အစုံ မတင်သွင်းသူ များဖြစ်နေပါတယ်။ Notice Board မှာ နာမည်ရှာရတဲ့အချိန်ဟာ စ်ိတ်အလှုပ်ရှားဆုံးပါ ကျွန်မရဲ့Serial No.(91)မှာ ပဏာမအဆင့်အောင်မြင်သွားပြီမို့ လူတွေ့ စစ်ဆေးခြင်းဖြေဆိုဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ရပါတော့တယ်။ ကျွန်မကတော့ သူငယ်ချင်းလေယာဉ်မောင်/မယ် တွေကို မေးမြန်းပြီး သူတို့ပြောပြတဲ့ အတွေ့အကြုံအချက်အလက်များအပေါ် မူတည်ပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခဲ့ပါတယ်။ လေယာဉ်မယ်လုပ်မယ့်လူက အနီးစပ်ဆုံး မိမိလေကြောင်းလိုင်းအကြောင်းကို ကောင်းကောင်းသိထားသင့်ပါတယ်။ မြန်မာလေကြောင်းလိုင်းကို ဘယ်အချိန်မှာ စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသလဲ၊
ဥပမာ-Myanmar Airways မှာ ဆိုရင် M.D(Managing Director)၊G.M (General Manager) O.M (Operation Manager)နဲ့ လေယာဉ်မယ်ချုပ်၊ လေယာဉ်မောင်ချုပ်တို့ရဲ့ နာမည်များကို အကျွမ်းဝင်သိရှိနေသင့်ပါတယ်။ နောက် Airline နဲ့ ပတ်သက်တာဆိုရင် လေယာဉ်အခေါ်အဝေါ်တွေ၊ မြန်မာပြည်မှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ လေယာဉ်အမျိုးအစားတွေ၊ Forker လား Jet လား၊ F-27နဲ့ F-28 က ဘာကွာလဲ ဆိုတာတွေ . .Air Bus တွေ ဖြစ်တဲ့ A-310,A-320,A-300အမျိုးအစားမှာ ဘယ် Air Bus အကြီးဆုံးလဲ ဆိုတာတွေ သိထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။
တစ်ခါတလေကျရင် Knowledge ပိုင်းအနေနဲ့ Asean အကြောင်း တွေ မေးတတ်ပါတယ်။ အထွေထွေမေးခွန်းဖြစ်တဲ့ Asean စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ 1967 ခုနှစ်၊ August 8 ရက်နေ့နဲ့မြန်မာပြည် Asean အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မည်သည့် ခုနှစ်မှာ ၀င်ရောက်လာပါသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းလေးတွေ မေးတတ်ပါတယ်။
(Ans:1997ခုနှစ်၊ July 23ရက်)
အဓိကက Myanmar Airways ရဲ့ Logo ဖြစ်တဲ့ (24)ပစ္စည်း၊ Moto ဖြစ်တဲ့ Safety, Service and Image (လုံခြုံဘေးကင်း၊ အသွင်အပြင်ကောာင်း၊ လုပ်ငန်းတာဝန်ကျေပွန်)
တို့လောက်တော့ သိရမှာပါ၊ ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ မေးခွန်းအနည်းအကျဉ်းပါ။ တကယ့်တကယ် ဘာမေးမလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကတော့ အင်တာဗျူး မေးမယ့် လူကြီးများအပေါ် မူတည်ပါတယ်။ လူကြီးတွေစိတ်ထဲ ပေါ်လာတဲ့ မေးခွန်းကတော့ အင်တာဗျူးမေးမယ့် လူကြီးများအပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
လူကြီးတွေ စိတ်ထဲပေါ်လာတာ မေးတတ်သလို၊ မိမိ Form မှာ ဖြည့်ထားတဲ့ အချက်အလက်များကို မူတည်ပြီးတော့လည်း မေးတတ်ပါတယ်။နောက်သုံးရက်ကြာတဲ့အခါ လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်းခံရန်အတွက် လိုအပ်တဲ့စာရွက်စာတမ်းနဲ့ ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာ၊ မှတ်ပုံတင်မူရင်း၊ ဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်းနဲ့အတူ ရုံးချုပ်ကို အရောက်သွားဖို့အတွက် တစ်ညလုံးအိပ်မပျော်တဲ့အပြင် မနက်မိုးမလင်းခင်ကတည်းက နိုးနေတဲ့အတွက် ဘုရားရှေ့မှာ မကြွတမ်းဦးချနေမိပါတော့တယ်။
သူငယ်ချင်းလေယာဉ်မယ်ရဲ့ Idea အတိုင်းမြန်မာဝတ်စုံရိုးရိုးလေးနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုလည်း အတတ်နိုင်ဆုံး Natural ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး တက်ကြွတဲ့ ခြေလှမ်းအပြည့်နဲ့ လေကြောင်းရုံးချုပ်ရှိရာ ကမ်းနားလမ်းကို မနက်(73း0)နာရီကတည်းက ဘုရားစာတတွတ်တွတ်ရွတ်ရင်း လှမ်းခဲ့ပါတယ်။ သတိထားရမှာက လက်ဝတ်ရတနာများပြွတ်သိပ်အောင် ၀တ်ဆင်ခြင်း၊ Make up တွေရဲဗလောာင်းခတ်အောင် ပြင်ဆင်ခြင်းများကို ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
ရုံးချုပ်ရောက်တော့ တစ်နေ့တာ ဖြေဆိုရမယ့် မောင်/မယ်ဦးရေ အယောက်(100)ဖြစ်နေတဲ့အတွက် နှစ်သုတ်ခွဲလိုက်တဲ့အခါမှာ အမှတ်စဉ်(91)ဖြစ်တဲ့ ကျွန်မက ဒုတိယအသုတ်ထဲမှာ ပါသွားခဲ့ပါတယ်။ ရောက်လာတဲ့အချိန်က နံနက်(7း45)နာရီ၊ Interview ဖြေရမယ့်အချိန်က နေ့လယ်(2)နာရီနောက် ပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအချိန်မှာ တော်တော်များများက စိတ်ပျက်လက်ပျက်ငြီးငြူသံများကို တရားဝင် ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ဘယ်လိုမှ မသင့်တော်တဲ့ အပြုအမူပါ၊ လေယာဉ်မယ်တစ်ယောက်မှာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုက အရေးအကြီးဆုံးပါ။
စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ပြီး သည်းခံနိုင်စွမ်းရှိမှ Emergency Case မှာဦးဆောင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်အလက်များဟာ အင်တာဗျူးခန်းပြင်ပမှာ ပေးသွားမယ့်အမှတ်ထဲမှာ အကျုံးးဝင်နေပါတယ်။ Persistent ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတာ ကို စမ်းသပ်တာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မ ဘယ်လောက်ထိ စိတ်ရှည်ခဲ့ရသလဲဆိုရင် Interview ခန်းထဲ ၀င်ခွင့်ရတဲ့အချိန်ကညနေ(63း0)နာရီမှ ဖြစ်ပါတယ်။ စောင့်နေစဉ် တစ်လျှောက်လုံး ဖြေပြီးသားတဲ့ သူငယ်ချင်းများဆီမှ အတွေ့အကြုံများကို မေးမြန်းရတာလည်းအမောပါပဲ။ တစ်ယောက်တစ်မျိုးစီ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် မေးခွန်းများကလည်း တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မတူကြပါဘူး။
ကျွန်မဆိုရင် တစ်နေကုန်စိတ်လှုပ်ရှားနေခဲ့တဲ့ အဖြစ်က Interview အခန်းဝမှာ ရပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ ရုတ်ချည်းပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အဓိကက Self-Confidence ကြောင့်ပါ။ ကျွန်မရဲ့ Weak point က ကိုယ့်ကိုကိုယ့် အထင်ကြီးတတ်ပါတယ်။ အဲဒီဥာဉ်ဆိုးက Air Crew လုပ်မယ့် အချိန်မှာ အသုံးတည့်နေပါတော့တယ်။ ကျွန်မအခန်းတံခါးစဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲ လေယာဉ်မောင် အစ်ကိုကြီး တစ်ယောက်က အရပ်ကိုထပ်မံတိုင်းပါတယ်။ သူတို့မယုံနိုင်အောင် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်မအရပ်က 5ပေ 8 လက်မလေ ။ Interview ဖြေရမယ့် ခုံမှာရပ်ပြီး မျက်နှာချင်းဆိုင်မှ မေးခွန်းမေးမယ့် လူကြီးများကို အချိုသာဆုံးပြုံးပြလိုက်ပါတယ်။
Best Smiling ရှိဖို့က အခြေခံတစ်ရပ်ပါ။ ထိုင်ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်မှာ လူကြီးများဖြစ်တဲ့ M.Dအပါအ၀င် လေယာဉ်မောင်ချုပ်/မယ်ချုပ်တို့ငါးဦးက မေးခွန်းများကို တလှည့်စီမေးကြပါတယ်။ကျွန်မကိုမေးတဲ့မေးခွန်းများက နည်းနည်းလွယ်ပါတယ်။
3. Can you swim? Why do you like swimming ? စတာလေးတွေပါပဲ။
မေးခွန်းမေးတဲ့အခါ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ အဖြေမျိုးကိုပဲ အတိုချုံးဖြေပါ။ ကျွန်မရဲ့ အဖြေက Yes, I prefer swimming to other sports becauseaswimmer can save myself and others in case of emergencies while travelling.
4.How much money do you expect asasalary?
I naturally expectahandsome salary, but I am keen to gain Knowledge and experience in the airline. Though I have no experience. If you appoint me to this post, I'm not afraid of hard work.
ဒီမေးခွန်းက အဖြေမတတ်ရင် တစ်ခါတည်း ဂျောင်းနိုင်တဲ့မေးခွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မကတော့ Amount ကို မဖြေပဲ ၀င်္က၀ုတ္ထိအလင်္ကာနဲ့ပဲ ဝေ့လည်ကြောင်ပတ်ဖြေခဲ့လိုက်ပါတယ်။
5.How many Languages can you speak?
ဒီမေးခွန်းကတော့ Other language မှာ Chinese ဆိုပြီး ထည့်ထားလို့ မေးတာပါ။ နာမည် ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ ဘယ်မှာ နေသလဲ၊ ထမင်းစားပြီးပြီလား၊ ဒီလောက်ပဲ မေးတာပါ။ မေးခွန်းဖြေနေစဉ်တစ်လျှောက် လုံးမှာ မိမိမျက်နှာပျက်မသွားဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြေနိုင်သည်ဖြစ်စေ၊ မဖြေနိုင်သည်ဖြစ်စေ မေးခွန်းများကို ပြုံးရွှင်ကြည်သာစွာ ဖြေဆိုသင့်ပါတယ်။ General Knowledge ပိုင်းအနေနဲ့Aircraftတစ်စီးရဲ့ ရုပ်ပုံကိုပြပြီး အင်ဂျင်ဘယ်နေရာ၊ လှေကားဘယ်နေရာနဲ့ ဘာလေယာဉ်အမျိုးအစားလဲဆိုတာ မေးပါတယ်။ နောက်တစ်ဆင့်က Announcement လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
G.M.T, L.M.T နဲ့ M.S.T တို့ကိုလည်း မေးပါတယ်။ ဒါမှလည်း Aircraft ပေါ်မှာ Take off time, Landing Time များကို ရောက်ရှိနေတဲ့ နိုင်ငံအပေါ် မူတည်တွက်ချက်ပြီး Announcement လုပ်ရမှာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
G.M.T=Greenwich Mean Time
L.M.T=Local Mean Time
M.S.T=Myanmar Standard Time
တချို့ဆိုလျှင် M.S.T ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိပဲ ပေါက်ကရမျိုးစုံလျှောက်ဖြေကြတာတွေ့ရပါတယ်။
In the Air-line system express 24 hours clock system.
ဖြစ်တဲ့အတွက် 1.min: passed mid night-0001hours
30 min passed midnight-0030hours
:6 Am express as -0600 hours
:9 pm express as -2100 hours
စသဖြင့် တွက်ချက်တတ်ဖို့အတွက် G.M.Tကို သိထားသင့်ပါတယ်။
ကျွန်မက စာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ဖြေလိုက်တဲ့အတွက် စာပေအကြောင်းမေးမြန်းပါတော့တယ်။ မြန်မာ့ပထမဦးဆုံးဝတ္ထုဖြစ်တဲ့ “မောင်ရင်မောင်၊ မမယ်မ”၀တ္ထုကို “ဆရာကြီးဂျိမ်းစ်လှကျော်” ရေးသားခဲ့တဲ့အကြောင်း၊ အနှစ်သက်ဆုံး စာရေးဆရာကိုမေးတော့ “ဂျာနယ်ကျော်မမလေး”လို့ ပြောလိုက်တဲ့အတွက် အကြိုက်ဆုံးစာအုပ်က ဘာလဲလို့ ထပ်မေးပြန်ပါတယ်။ မသိရင် မသိပါဘူးလို့ ပြောတာ သက်သာပါတယ် မဟုတ်ရင် ရွှီးမိတဲ့အတွက် အဟားခံရတတ်ပါတယ်။
ကျွန်မက “သူလိုလူ”လို့ လွယ်လွယ်ဖြေတော့နာမည်ကြီးမို့လို့ရွေးကြိုက်တာလားတဲ့။ နောက်ဆုံးမှာ “မင်းငါတို့ ဘာပြန်မေးချင်သလဲ လို့မေးလာခဲ့တဲ့အတွက် No Question လို့ပဲ ဖြေလိုက်ပါတယ်။ မမေးသင့်တာသွားမေးမိရင် အမှတ်လျော့သွားနိုင်ပါတယ်။ မေးခွန်းအားလုံးစိတ်တိုင်းကျမေးပြီးကြချိန်မှာ ပြန်လို့ရပါပြီလို့ ပြောလာမှ နှုတ်ဆက်ပြီးထပြန်လာခဲ့ပါတယ်။ လူတွေ့စစ်ဆေးရွေးချယ်ပြီးသွားတဲ့အခါ တတိယအဆင့်အနေနဲ့ အောင်မြင်သွားသူ (75)ယောက်ကို ရေကူးစစ်ဆေးခြင်း စမ်းသပ်ပြုလုပ်ပါတယ်။
ရေကူးစစ်မယ့်နေ့ နံနက် (8း00)နာရီမှာပဲ National Swimming Pool သို့ မှတ်ပုံတင်မူရင်းနဲ့ Swimming Suit အပြည့်အစုံယူလာပြီး စာမေးပွဲဖြေဆိုရပါတယ်။ ကျွန်မအရှေ့မှာ သတိပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းပါပဲ၊ Form မှာ ဖြည့်စဉ်ကတည်းက ရေကူးတကယ်တတ်မှတတ်တယ်လို့ဖြေပါလို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဖြီးဖြန်းပြီးဖြေခဲ့တဲ့ မောင်/မယ် အချို့ဟာ ဒီလိုလက်တွေ့စစ်ဆေးတဲ့နေ့မှာပဲ ဗူးပေါ်သလို ပေါ်ကုန်ကြတဲ့အတွက်ပါ။ ကူးရမယ့် ရေအနက်က (6)ပေဖြစ်ပြီး (25)မီတာကို စိတ်ကြိုက်ကူးနည်းပုစံဖြင့် အပြန်အလှန် ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်မကတော့ ရေကူးအကျွမ်းကျင်ကြီးမဟုတ်ပေမယ့် ကူးတတ်ခါစဖြစ်နေတဲ့အတွက် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိနစ်ကျော်သွားပေမယ့် လက်ပစ်နဲ့ ပက်လက်ကူးနည်းဖြင့် ပန်းတိုင်ကိုအရောက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါသေးတယ်။ မထင်မှတ်ဘဲ ကျွန်မရဲ့ ရေကူးဆရာမ မမိုးသူအောင်နဲ့မကြည်ကြည်တို့က ရေကန်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ အတွက် သူတို့ရှေ့မှာ အရှက်ကွဲမှာစိုးပြီး ကြောက်လန့်ပြီးကူးတာကြောင့်လည်းပါတာပေါ့။ မကူးတတ်တဲ့သူများ ကတော့ ရေကန်ထဲ စဆင်းကတည်းက ငိုတဲ့သူက ငို၊ တချို့ဆို လက်ပစ်ကူးရင်း၊ ကန်တစ်ဝက်မှာ နစ်သူကနစ်နဲ့ သနားဖို့လည်းကောင်း၊ စိတ်ဆင်းရဲစရာ လည်းကောင်းပါတယ်။ ရေကူးနည်းပြ ဆရာနှစ်ယောက်က ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘေးကနေ အရန်သင့်အသက်ကယ်ဘောများ Life Vest များနဲ့ ကြီးကြပ်ပြီးလိုက်ပါပေးခဲ့တဲ့ အတွက် မကူးတတ်သူများ သက်သာရာရခဲ့ကြပါတယ်။
ကျွန်မသူငယ်ချင်းတော်တော်များများ က ဖားကူးအသက်ရှုနည်းဖြင့်ကူးသွားကြပြီး လက်ပစ်ကူးသူက နည်းပါတယ်။ ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲ ကူးကူးပါ ပန်းတိုင်ရောက်ရင် နာမည်နဲ့အမှတ်စဉ်မေးပြီး လေယာဉ်မယ်ချုပ်က တစ်ခါတည်းအမှတ်ပေးပါတယ်။ အဲဒီနေ့က မောင်/မယ် အချို့ရဲ့ ပေါ့ဆမှု ကလေးကိုပြောပြချင်ပါတယ်။ မှတ်ပုံတင်မူရင်း ပါမလာကြတဲ့အတွက် လေယာဉ် မောင်ချုပ်က အကြီးအကျယ် ကောပါတော့တယ်။ မြေပြင်ပေါ်မှာတောင် ဒီလောက်ပေါ့ဆနေရင် Aircraft ပေါ်မှာ ကိုယ့်ကိုကို ယုံကြည်အားကိုးမယ့် ခရီးသည်တွေကို ဘယ်လို Service ပေးမှာလဲတဲ့။
ရေကူးအောင်ပြီး နောက်ရက်မှာတော့ Medical Check up စာမေးပွဲစစ်ပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေစဉ်တစ်လျှောက်လုံးမှာ Speaking ကျွမ်းကျင်မှုကို အမှတ်ပေးသလို၊ Relationship ကိုလည်း အမှတ်ပေးပါတယ်။ စာမေးပွဲဖြေတာပဲ ဘာဝတ်ဝတ်ရပါတယ် လို့ လွယ်လွယ်မထင်လိုက်ပါနဲ့ Personality ကိုလည်း အမှတ်ပေးပါတယ်။ လေယာဉ်မယ်လုပ်မယ့် လူတစ်ယောက်က အမြဲတမ်း Smart ကျနေဖို့လိုပါသေးတယ်။ ရုံးချုပ်မှာလိုအပ်တဲ့ Weight Measure/ Height Measure/ Hypertension Diabetes Mellitus (ဆီးချို)၊ HBs Ag test (အသားဝါ Bပိုး)၊ H.I.V, Cholesterol စသည်တို့အပြင် Ultersound, E.C.G တို့ကို အစစ်ဆေးခံယူရပါတယ်။
ဆေးစစ်တဲ့နေ့မှာပဲ ကျွန်မတို့ကို Group လိုက် Stay ရိုက်၊ တစ်ဦးချင်းမိတ်ဆက်စကားပြောပြီး Camera နဲ့တစ်ခါတည်း ရိုက်ထားလိုက်ပါတယ်။
စတုတ္ထအဆင့် ဆေးအောင်သွားပြီဆိုရင် ပဉ္စအဆင့်အနေနဲ့ Writing ဖြေဆိုကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မက အဲဒီအဆင့်ကို အကြောက်ဆုံးပါပဲ။ ကျွန်မအတွက် နေ့မအား၊ ညမနားစာအုပ်နဲ့မျက်နှာမခွာဘဲ ကျက်မှတ်ခဲ့ရတဲ့အချိန်များပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ Experience မရှိသေးပေမယ့် သူငယ်ချင်း လေယာဉ်မယ်တွေက အိမ်တိုင်ရာရောက် Training လာလုပ်ပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက် လေ့လာသင့်သလောက် လေ့လာခွင့်ရခဲ့ ပါတယ်။ G.M.T တွက်နည်းပုစ္ဆာများသင်တဲ့အချိန်ကဆို ခေါင်းတစ်လုံးချာချာလည်ခဲ့ရပါတယ်။
ဥပမာ - Myanmar G.M.T - (+6.5)
Singapore G.M.T - (+8)
Korea G.M.T - (+9)
Myanmar နဲ့ Singapore က G.M.T နဲ့တွက်ရင် အချိန် (13း0)နာရီကွာခြားပြီး Korea နဲ့ဆိုရင် အချိန် (23း0)နာရီ ကွားခြားပုံကို တွက်ချက်နည်းဖြစ်ပါတယ်။
Writing ဖြေဆိုရမယ့် I.B.C ခန်းမကို မနက် (83း0)နာရီအရောက်သွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် နာရီဝက်စောပြီးရောက်အောင် ကိုယ့်ဘက်က ၀ီရိယရှိဖို့လိုပါတယ်။ ကျွန်မတို့ Airline က Korea နဲ့ဖက်စပ်စီစဉ်ထားတာဆိုတော့ မေးခွန်းများကို Korea Air line ဖက်က ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဖြေဆိုမယ့်မနက် စာမေးပွဲအခန်းထဲရောက်ချိန်ကျမှစာအိတ်ှ Parking ဖောက်ပြီး မေးခွန်းဝေပါတယ်။ ခုံခြင်းကပ်ရက်ထားပေမယ့် မေးခွန်းအားလုံးကို Group A, B, C သုံးမျိုးခွဲပြီး ထုတ်ထားတဲ့အတွက် ခိုးကြည့်လို့ရရင် တောင်တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်မေးခွန်းမတူတဲ့ အတွက် ကူးချလို့လည်း မရပါဘူး။
ကျွန်မရဲ့ Question Paper Group က (A) ဖြစ်ပြီး ညာဘေးချင်းကပ် သူငယ်ချင်းက (B) ဘယ်ဘေးချင်းကပ်သူငယ်ချင်းက (C) ဖြစ်ပါတယ်။ Question Type က Multiple Choice ဖြစ်တဲ့အတွက် Time allowed က (45) မိနစ်ပဲ ပေးပါ တယ်။ Psycho-analysis များလည်းပါတော့ အရမ်းဦးနှောက်စားရပါတယ်။ ဖြေဆိုချိန်မလောက်ခဲ့ပေမယ့် Blank မရှိအောင် အကုန်ဖြည့်ခဲ့လိုက်ပါတယ်။ Grammar နားလည်၊ မလည်စစ်သလို၊ English လို ဘယ်လောက်တတ်၊ မတတ်စစ်တဲ့အဆင့်လို့လည်း ပြောလို့ရပါတယ်။ I.B.C ခန်းက Aircon များတောင်ရင်ထဲက အပူကို မနိုင်ခဲ့ပါဘူး။
Korea Agent တစ်ယောက်က ကျွန်မစာမေးပွဲမဖြေခင် ဘုရားဦးချပြီး မေးခွန်းစာရွက်ကို ရှိခိုးတာမြင် တော့ရယ်ပါတယ်။ မင်းတို့မြန်မာမိန်းကလေးတွေက အစွဲကြီးလိုက်တာလို့ပြောပါတယ်။
ပြောချင်တာပြောပါစေ၊ ပြောသမျှသာ ပြုံးပြုံးလေးနာခံနေလိုက်ပါတယ်။
ဆဌမအဆင့် စစ်ဆေးမှုပုံစံကတော့ Group Test ဖြစ်ပါတယ်။ ငါးယောက်တစ်အုပ်စု Group Discussion လုပ်ရမှာပါ။ မေးခွန်းများကို Korea များကပဲ သတ်မှတ်ပေးပါတယ်။ ခုံ (5)လုံးချ ထားပြီး ကျွန်မတို့ ရှေ့ Table မှာ လူကြီးနှစ်ယောက်ထိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မတစ်သက်တာမှာ ဒီလောက်အဆင့်များတဲ့ စာမေးပွဲမျိုးမဖြေခဲ့ဖူးပါ။
ကျွန်မတို့ Group ရဲ့ Title က “ဘ၀မှာ ပညာရေးနဲ့ အလုပ်အကိုင် ဘယ်အရာက သင့်အတွက် ပိုအရေးကြီးပါသလဲဆိုတဲ့ Education and Occupation ကို Discuss လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးချင်းစီအမြင်များနဲ့ သင့်တော်သလို ဆွေးနွေးကြရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ သတိထားရမှာက သူများပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်ဘာပြောရင်ကောင်းမလဲဆိုတာကို စဉ်းစားထားရပါတယ်။ Grammar မှန်တာ၊ မမှန်တာအပထား၊ ပြောတတ်သလောက် ရဲရဲဝံ့ဝံ့သာပြောချသင့်ပါတယ်။ “ခွေးအကြီးလှည်းနင်းခံရသလို တအီအီလုပ်နေရင် နိုင်ငံခြားသားရှေ့မှာ အရှက်ကွဲစေပါတယ်။ Impression Down တာပေါ့လေ။
နောက်တစ်ချက်က မိမိက Occupation ကို Discuss လုပ်ထားပြီး သူများက Education ကို Discuss လုပ်တဲ့အပေါ်မှာ ငြင်းခုန်တာမျိုး မလုပ်မိပါစေနဲ့။ ကျွန်မတို့ပြောဆိုသမျှကို လူကြီးများ က နားစွင့်နေတာဖြစ်ပြီး Camera ထောင်ပြီး Live တစ်ခါတည်း ရိုက်ထားပါတယ်။ ကျွန်မဆို လန့်ဖျတ်ပြီး အသံတောင်တိမ်သွားပါတယ်။ အတတ်နိုင်ဆုံး တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့ ပြတ်ပြတ်သားသားပြောသင့်ပါတယ်။ အတူတူဖြေကြတဲ့ ကျွန်မတို့ ငါးယောက်ဆိုရင် အခန်း အပြင်ကိုရောက်မှပဲ သက်ပြင်းပြိုင်တူချနိုင်ပါတော့တယ်။ အဲဒီနေ့က ကျွန်မ ၀တ်သွားတဲ့ မြန်မာ ၀တ်စုံက ရိုးပေမယ့် Bright Color ဖြစ်နေတဲ့အတွက် Korea Agent များက မျက်စိ ကျိန်းတယ်လို့ ဝေဖန်ပါတယ်။
Interview အဆင့်ဆင့် ဖြေလာနိုင်ခဲ့တော့ ကျွန်မပိုပြီး exciting ဖြစ်ရပါတယ်။ အဆင့် (6)ဆင့်လုံးလုံး လှမ်းလာနိုင်ခဲ့တဲ့ အတွက်ပိုပြီး အားတက်ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအဆင့် Individual မှာတော့ exciting ပိုပြီး ဖြစ်ရပါတယ်။ နောက်ဆုံးအဆင့် Individual မှာတော့ Korea က Chief ကိုယ်တိုင်စိတ်ကြိုက်မေးမြန်းပါ တယ်။ ကျွန်မဆိုရင် အခန်းထဲရောက်လို့ ခုံမှာထိုင်တယ်ဆိုရင်ပဲ First Aid အကြောင်းမေး ပါတော့တယ်။ တကယ်ဆိုရင် experience ရှိပြီးသား မောင်/မယ်များကိုသာ မေးလေ့ မေးထ ရှိတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပြီး ကျွန်မလိုအစိမ်းသက်သက်ကိုကောက်ခါငင်ကာ မေးလိုက်တဲ့အတွက် အံ့သြ သွားခဲ့ရပါတယ်။ Nose Bleeding, Abdominal Emergency, Fainting တို့ကို ကျွန်မ Treatment လုပ်တတ်သလောက် ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
နောက် မေးခွန်းတစ်ခုကတော့ ခန့်မှန်းထားတဲ့ မေးခွန်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် လွယ်လွယ်ကူကူဖြေနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
This is the first time I arrive in Myanmar. So, which place is the most interesting places in here? Suggest me, firstly which places I should go?
ကျွန်မအလွတ် ကျက်ထားတာက ရွှေတိဂုံဘုရားအကြောင်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် ရွှေတိဂုံဘုရားက Magnificent and Marvellous ဖြစ်တဲ့အကြောင်း၊ prominent landmark ဖြစ်တဲ့အတွက် မိုင်ပေါင်းများစွာကနေ အထင်အရှားမြင်နိုင်ကြောင်း လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (2500) လောက်ကတည်းကတည်ဆောက်ခဲ့တယ်လို သိရှိရကြောင်း၊ height က (362)ပေဖြစ်ပြီး stands likeasolid gold monument အဖြစ် ရပ်တည်နေကြောင်း ပါးစပ်ထဲ အဆင်ပြေ သလို ဖြေလိုက်ပါတယ်။
A visit to Yangon is incomplete withoutavisit to Shwe Dagon Pagoda ဆိုပြီး ထပ်ကွန့်လိုက်မိတဲ့အတွက် Continue လို့ပြောပြန်ပါတယ်။ နောက် ကျွန်မ မဖြေနိုင်တော့ပါဘူး။ နောက်တစ်ချက်က Weak Point နဲ့ Best Point က ဘာလဲဆိုတာရယ်။ လောကမှာအရေးကြီးဆုံးကို ပြောပါဆိုတော့ 'My mind' လို့ဖြေခဲ့ပါ တယ်။ နိုင်ငံခြားသားက ဖြေနိုင်ရင်တောင် ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့ reason ပေးမှကြိုက်ပါ တယ်။
The mind is the most powerful in the world. We think speak and act as directed by our minds. Good minds with good intentions per form good actions. These good actions bring good benefits to all.
ဒါဟ ကျွန်မအတွက် သင့်တော်မယ်ထင်တဲ့ Reason ပါ! ကျွန်မကို ဘာကြောင့်လေယာဉ်မယ် ဖြစ်ချင်တာလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကလည်း အခက်အခဲသိပ်မရှိပါဘူး။ ဒီမေးခွန်းကိုဖြေတဲ့အခါ ငွေကြေးနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ မဖြေသင့်ပါဘူး။ မိမိတကယ်စိတ်ဝင်စားကြောင်း၊ နားလည်အောင် ဖြေသင့်ပါတယ်။
ကျွန်မကို ခေါင်းခြောက်စေတဲ့ မေးခွန်းကတော့
I would like to know the Historical Background of Myanmar ဆိုတဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။
ဒီလောက်ကြီးတော့ ဘယ်သိပါ့မလဲ၊ ကျွန်မသိတာက အေဒီ(1044) ခုနှစ်မှာ အနော်ရထာမင်းက ပုဂံပြည်မှာ နန်း တက်ခဲ့ပြီး ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော်ကို တည်ထောင်ခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ သိတဲ့အတွက် သိသလောက်ပဲဖြေတာကို မကြိုက်ကြပါဘူး။ ဆက်ပြောခိုင်းတဲ့အတွက် I don't have much knowledge in that field လို့ ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေးပဲ ပြန်ပြောလိုက်တယ်။ သူရဲ့ မေးခွန်းတွေက လူမှုဘ၀နဲ့ ဆိုင်တာမျိုးတွေလည်းပါ ပါတယ်။ အဲဒီအခါမှာ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီး စေမယ့် အဖြေမျိုးမဟုတ်ဘဲ တကယ့်လက်တွေ့ဘ၀မှာ သဘာဝကျတဲ့အဖြေမျိုး ဖြေတတ်ဖို့အထူးဂရုစိုက်ရပါမယ်။
ကျွန်မအတွက် အခက်ကြုံစေတဲ့မေးခွန်းက အရက်သမား Passenger နဲ့ ကြုံတွေ့လာရင် ဘယ်လို Handle လုပ်မလဲပေါ့? ကျွန်မအဖြေကို Korea Chief က သဘောမကျပါဘူး။ ရုပ်လည်းအရမ်းပျက်ခဲ့ရပါတယ်။ မေးခွန်းတွေက များပြီးခက်တဲ့အပြင် ဖြေပြန်တော့လည်း အဖြေကို မနှစ်သက်ကြပါဘူး။ White Board မှာ စာရေးခိုင်းတာကတော့ ဘာသဘောလဲ နားမလည်ပါဘူး။ ကျွန်မရဲ့လေယာဉ်မယ်အတွေ့အကြုံတွေက ဒီလောက်ပါပဲ။
ကျွန်မရှေ့မှာအနာဂတ် လှေကားတွေက အဆင်သင့်ရှိနေပြီသား၊
ခပ်သွက်သွက်နဲ့ လှမ်းတက်ပြီးနောက် ပြန်လန်မကျအောင် ကြိုးစားရင်း ကျွန်မ ၊ မလျောက်လှမ်းဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ လေယာဉ်မယ်ဘ၀ရဲ့ အတွေ့အကြုံများကို အခြေခံပြီး ၀ါသနာတူ သူငယ်ချင်းတို့ အမှားနည်းနိုင်ကြစေဖို့ ဆန္ဒပြုရေးသားလိုက်တာပါ။
( Myanmar Airways မှ သူငယ်ချင်းများသို့ အမှတ်တရ)
Labels: ကျမရဲ့အိမ်မက်တွေ, အမှတ်တရပုံရိပ်လေးများ, ဆောင်းပါး
မောင်လေးကတော့ လေယာဉ်မယ်ကို ၀တ်စားဆင်ယင်ထုံးဖွဲ.မှုနဲ.
Fire Flower said...
မ ဆုရေ ... ဖတ်ရတာ အ၇မ်း ဗဟုသုတ ရတာပဲ ..။ဝေမာတို့ မကြုံဖူးတဲ့ဘ၀ အတွေ့အကြုံမျိုးပါ ..။ မ ဆုကို လေးစားရတဲ့ အထဲမှာ စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယရယ်.၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိတာရယ်.၊ နောက် ဇွဲရှိတာတို့ပေါ့ ..။ အားလုံးပါပဲ .။ မ ဆုက ဝေမာ လေးစားရတဲ့ သူ တစ်ယောက်ပါ ..။ နောက်ထပ်လည်း မ ဆု လျှောက်လှမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ လမ်းကလေးတွေ အကြောင်း ထပ်ပြိး တင်ပေးဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ် ............ဒီ ပို့စ်လေးအတွက် အရမ်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ... ..ဝေမာ့ကို ညီမတစ်ယောက်လို သဘောထားပေးဖို့ကိုလည်း မျှော်လင့်ပါတယ်နော် ....
မောင်လေးဝေယံနဲ့ ညီမလေးဝေမာ တို့ ရေ====ဆု တတ်မြောက်ထားတဲ့ စာပေရေးသားခြင်းကို အားလုံးအတွက်အကျိုးရှိအောင် အသုံးပြုသွားပ့ါမယ်။ အားပေးချစ်ခင်မှုတွေအတွက် ကျေးဇူးပါနော်။
ငယ်ငယ်က အားကျခဲ့ရတဲ့အထဲမှာ လေယာဉ်မယ် အလုပ်လည်းပါတယ်..
အင်း ခုတော့လည်း ရောက်ရအရပ်ဖြစ်ရာဘ၀မှာ နေသားကျ ပျော်ရွှင်နေပါပြီ